မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Introduction to Helping Hands of TP Myanmar & BPP Challenges
Introduction to Helping Hands of TP Myanmar & BPP Challenges
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ ဒီပိုစ့်မတင်ဖြစ်တာနဲ့ ကိုရီးယား ခရီးသွားပိုစ့်ပါမတက်လာဖြစ်နေတော့တာပါပဲ… အကြောင်းကတော့ သူကြီးမင်း တုံးဖလား ဘလော့ပိုင်ရှင် ကိုကိုမောင်UK က ဘလော့ဒေးအမှတ်တရအနေနဲ့ ဘလော့တွေ ပြန်လည်စည်ကားလာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး Ice-bucket Challenge လိုမျိုး Blog Post Publish Challenge (BPP challenge) ကိုစခဲ့တာပါပဲ…
ဘလော့ပိုစ့် challenge ခေါ်ခံရပြီး ၂ပတ်အတွင်း ကိုယ့်ဘလော့မှာပိုစ့်တင်ရင်တင် မတင်ရင် နှစ်သက်ရာ ပရဟိတအဖွဲ့ကို မြန်မာငွေ ၅၀၀၀ နှင့်အထက် ကြိုက်သလောက်လှူဖို့ပါ… Ice-Bucket challenge နဲ့ မတူတာကတော့ မရေးမှ လှူရမှာဖြစ်ပြီး ရေးရင်တော့ မလှူချင်လဲရပါတယ်တဲ့… သူကြီးမင်း(တုံးဖလား)ရေးထားတဲ့ အဆင့်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးပါအုံးမယ်…
အဲဒါနဲ့ တစ်ဆက်တည်း ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ မဗေဒါ လစဉ်အလှူငွေထည့်ဝင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ထားတဲ့ TP Myanmar Helping Hands အဖွဲ့လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်…
TP Myanmar Helping Hands ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအကျဉ်း
(Helping Hands of TP Myanmar Public group မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ (၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁) မှာ TP ကျောင်းသူကျောင်းသား(ဟောင်း/သစ်)များ စုဝေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ချို့တဲ့စွာ ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ထောက်ပံ့ဖို့ ကြိုးစားကြမယ်လို့ သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ချို့တဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ ထိရောက်တဲ့ အထောက်အပံ့ဖြစ်မယ်လို့ လက်ခံယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ပါ။
(တီပီမြန်မာကျောင်းသားဟောင်းတွေနဲ့ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပေမဲ့ တီပီကျောင်းသားမဟုတ်တဲ့ မည်သူမဆို ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်… မဗေဒါ မေမေတောင် လစဉ်လှူဒါန်းသူအနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်…)
အဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် (Helping Hands of TP Myanmar Public group မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
• နိုင်ငံခြားတွင် ပညာသင်ကြား (သို့မဟုတ်) အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ အနေဖြင့် ပြည်တွင်းမှ ချို့ချို့တဲ့တဲ့နှင့် ကျောင်းတက်နေရရှာသော ကျောင်းသားလေးများ၏ ဘ၀လေးများ လှပစေဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီရန်၊
• ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦးစားပေးသော အလှူများကို အလှူငွေရရှိမှုပေါ်မူတည်၍ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းသွားရန်၊
• TPmyanmar ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ၏ လစဉ်ထည့်ဝင် လှူဒါန်းငွေများကို လက်ခံရန်နှင့် ရေတိုရေရှည်လှူဒါန်းမှုများကို စည်းစနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်သွားရန်၊
• လှူဒါန်းမှူများ ထိရောက်မှုရှိစေရန်နှင့် အလှူရှင်များ စိတ်ကျေနပ်မှုရစေရန် အတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရေးအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးပမ်းသွားရန်၊
မဗေဒါဟာ တီပီကျောင်းသူဟောင်းမို့ လှူတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တာထက်
၁။ တီပီမြန်မာကူညီသောလက်များအဖွဲ့ရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ Manage လုပ်တာကို သဘောကျလို့ လစဉ်လှူဖြစ်တာပါ။
နောက်ပြီး ဒီအဖွဲ့ဟာ တီပီက ကျွန်မတို့ လေးစားခင်မင်ရတဲ့ မြန်မာဆရာမ ဒေါ်ခင်အမ်းမွန် ကိုယ်တိုင် ကျောင်းသားဟောင်းတွေကို ကြီးကျပ်ပြီးလုပ်ပေးတဲ့အတွက် စည်းကမ်းကျနပြီး စေ့စပ်ပါတယ်။
၂။ အဖွဲ့အစည်းထဲက လူတွေအားလုံးကလဲ ကိုယ့်လိုပဲ စကာင်္ပူမှာ အခြေခိုင်နေပြီး ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် ဒီအဖွဲ့ကို community အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ရော သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်း အသစ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိနေဖို့အတွက်ရော ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ ပရဟိတဗန်းပြပြီး လုပ်စားမဲ့သူတစ်ယောက်မှ မပါဘူးဆိုတာ ယုံကြည်မှုရှိလို့ပါ။
၃။ ပြီးတော့ မိဘမဲ့ကျောင်းတစ်ခုကို လှူဖို့ရွေးတော့မယ်ဆိုရင် မိဘမဲ့ကျောင်း ၃၊ ၄ကျောင်းကို ရန်ကုန်က တီပီကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းတွေက အသေအချာရှာဖွေပေးပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့ မဲဆန္ဒနဲ့ မဲအများဆုံးရတဲ့ ကျောင်းတွေကို လှူတာပါ။ အဲဒိအတွက် ဒီမိုကရေစီကျကျ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုကို ပါဝင်စေတဲ့အတွက် သဘောကျပါတယ်။
၄။ အလှူငွေစာရင်းကောက်ခံရရှိငွေအားလုံးကို ၃လတစ်ကြိမ်စုစည်း လှူဒါန်းပြီး လှူဒါန်းသမျှစာရင်း အပြည့်အစုံကို ဖေ့ဘွတ်အဖွဲ့မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပြန်လည်မျှဝေ အသိပေးပါတယ်။ (ကျွန်မသိသလောက်တော့ တစ်ခါလှူရင် အပိုငွေမထားပဲ လိုနေရင်တောင် ကမကထ လုပ်သူတွေက သူတို့ အိတ်ထဲက ထပ်စိုက်ပြီး အပြည့်အ၀ လှူတာပါ)။
၅။ သွားလှူတဲ့နေရာက ကလေးတွေကို သူတို့ပြောချင်တာလေးတွေ အမှတ်တရ စာရေးခိုင်းပြီး ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တင်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်မှာမရှိလို့ မပါဝင်လိုက်နိုင်တဲ့ အလှူရှင်တွေလဲ စာလေးတွေဖတ်ပြီး ပီတိဖြစ်လို့ရပါတယ်။ (သူတို့ ရေးတဲ့ တချို့စာလေးတွေဆို ဖတ်ရကောင်းလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင် ကျမိတာတွေရှိတယ်)။
၆။ မဗေဒါ တစ်ကြိမ်တော့ ဒလက ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလှူတာကို ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာမှာ လိုက်ဖူးပါတယ်။ အဲကွန်းဘတ်စ်ကြီး အကြီးကြီး ငှားပြီး အားလုံး စုပေါင်းသွားကြ။ ဟိုမှာ ကလေးတွေနဲ့ ဆော့ကြနဲ့ အရမ်းကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါပဲ။
ဒီတော့ BPP-challenge နဲ့ ပြန်ဆက်ရရင်တော့။ ဘယ်မှာ လှူရမှန်းမသိဘူးဆိုရင် တီပီမြန်မာကူညီသောလက်များအဖွဲ့မှာ လစဉ်အလှူရှင်မလုပ်ချင်လဲ One time အလှူအနေနဲ့ လှူဒါန်းလို့ရကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
ထမင်းတွေလဲ အများကြီးစားတယ်၊ ဓာတ်ပုံမရိုက်ခင် ခပ်တည်တည်နေပြီး ဖုန်းထုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်တော့မှ ဟောသလို ချစ်စရာရုပ်လုပ်တယ်...
အားလုံးကို အအေးဗူးနဲ့ ဗလာစာအုပ်တွေ ဝေတယ်...
စောင်တွေနဲ့ တခြားလိုအပ်မဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ကျောင်းကိုလှူတယ်...
သူတို့ဆီက ပေးစာ... တချို့...
Very Touching Letter from one of them...
This is one of the Heart warming letter from them...
မဗေဒါ ဒီပိုစ့်လေးနဲ့ ပြန် Challenge လုပ်လိုသူများကတော့…
၁။ Fan Fic တွေကို ဖေ့ဘွတ်မှာပဲ ရေးပြီး ဘလော့လေး လူမလာလို့ ဘလော့မှာ မတင်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ညီမလေး ယမမင်းလေး ဘလော့ပိုင်ရှင် ( http://yaminohmar.blogspot.sg/ )
၂။ သူများတွေ Challenge လုပ်ပြီးပေမဲ့ ကိုယ်မလုပ်ရသေးလို့ ထပ်လုပ်လိုက်တဲ့ မဗေဒါ ဘလော့ကို အမြဲအားပေးတဲ့ HsuMyat (http://hsumyatmoe88.blogspot.sg/)
၃။ မဗေဒါကို Challenge ခေါ်ခဲ့တဲ့ ၀တ္တုတိုတွေအရေးကောင်းတဲ့ မဆွေလေးမွန် (www.whitewhitemind.blogspot.com)
၄။ BPP challenge ကို စခဲ့ပြီး မဗေဒါကို Challenge ခေါ်ခဲ့တဲ့ သူကြီးမင်း (http://kokomaunguk.blogspot.co.uk/)
၅။ မြန်မာ့ ပထ၀ီတွေ ပြန်လည်လေ့လာရင်း ဖေ့ဘွတ်မှာရော ဘလော့ပေါ်မှာပါ ပျောက်နေတဲ့ မေဖလားဝါးပိုး (http://33poepoe.blogspot.sg/) (မြန်မာဖောင့်မရှိရင် ခုဒေါင်းပြီးရေးပါ (သို့) မဗေဒါ sidebar က ဘားကလစ် keyboard (http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm) နဲ့ တစ်လုံးချင်းရိုက်ရေးပါ)
၆။ တိတ်တိတ်လေး ဘလော့ရေးနေပြီး စာရေးကောင်းတဲ့ မရွှန်းမီ (http://present-of-lifetime.blogspot.sg/) (အင်္ဂလိပ်လိုရေးရေး မြန်မာလိုရေးရေး ရေးရင်ရဘီ)
၇။ ခုထက်ထိလဲ ဘလော့ရေးနေစဲ ဖေ့ဘွတ်မှာလဲ active ဖြစ်တဲ့ ကိုလင်းဦး (စိတ်ပညာ) (http://www.linoo.asia/)
၈။ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ မုန့်တွေနဲ့ အဖြူရောင်ကြောင်ပုံပဲတင်နေတဲ့ စာရေးကောင်းတဲ့ (ခုလောလောဆယ် မမဗိုက်) ဗစ်စတာအောင် (http://vistazplanet.blogspot.sg/)
၉။ ယူနီကုတ်နဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး လှနေတဲ့ ဘလော့ပိုင်ရှင် သယ်ရင်း မင်းယွန်းသစ် (http://minnyoonthit.net/)
၁၀။ ကိုယ် Challenge လုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် စိတ်ဝင်စားစရာပိုစ့်တွေ လောလောဆယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှတ်တမ်းပိုစ့်တွေရေးနေတဲ့ နန်းညီ (http://nangnyi.blogspot.sg/)
ခုလို Challenge ခေါ်ခံရလို့ Stress လဲ မဖြစ်စေချင်သလို၊ စိတ်လဲ မဆိုးကြစေချင်ပါ။ ဟီး…. ခင်မင်ရတဲ့သူတွေလဲဖြစ်၊ စာရေးကောင်းမှန်းသိထားသူတွေလဲဖြစ်လို့ ဘလေ့ာလေးပေါ် active ဖြစ်စေချင်လို့ သတိတရ Challenge ရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရှန်….
(အောက်ပါ BPP-Challenge အဆင့်များကို သူကြီးမင်း(တုံးဖလား) ဆီမှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်)
သတ်မှတ်ချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း အကြမ်းဖျင်း ပြုလုပ်ထားပါသည်။ လုိုအပ်သည်များကို ထပ်ဖြည့်ပေးကြရန်လည်း တောင်းခံပါသည်။
၁။ ဘလော့ဂါတစ်ယောက် တစ်ခါ BPP-Challenge လုပ်လျှင် ဆယ်ယောက်ထက် ပုိုပြီး မလုပ်ရ။
၂။ BPP-Challenge လုပ်ထားကြောင်း အချိန်မီ အကြောင်းကြား၍ ရနုိုင်သည့် ဘလော့ဂါတုို့ကုိုသာ BPP-Challenge လုပ်ရမည်။
၂။ BPP-Challenge အလုပ်ခံရသူသည် BPP-Challenge လုပ်ပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း ဘလော့ပေါ်၌ ပို့စ်တစ်ပုဒ် တင်ရမည်။
၃။ BPP-Challenge အလုပ်ခံရသူသည် မိမိနှစ်သက်ရာ ခေါင်းစဉ်၊ မိမိနှစ်သက်ရာ အကြောင်းအရာတုို့ကို ရေးနိုင်သည်။
၄။ နှစ်ပတ်ကျော်လွန်ပြီး ပုို့စ် မတင်နိုင်ပါက မိမိနှစ်သက်ရာ ပညာရေးလုပ်ငန်းသုို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀၀၀ နှင့် ညီမျှသော သက်ဆုိုင်ရာငွေကြေး အလှူငွေကုို ပေးလှူရမည်။ (ထုိုထက်ပုို၍ ပေးလှူလုိုပါကလည်း လက်ခံပါသည်)။ (TP မြန်မာ Helping Hands အဖွဲ့ရဲ့လစဉ်အလှူရှင်ဝင်ပီပီ ဦးစွာအနေဖြင့် တီပီမြန်မာကူညီသောလက်များကို ပေးလှူရန်ဟု အကြံပြုချင်သည်။)။း)
၅။ လှူဒါန်းမှု ပြုလုပ်ပြီးသော ဘလော့ဂါများကိုလည်း နှစ်ပတ်ကျော်လွန်ပါက ထပ်မံ၍ BPP-Challenge လုပ်နုိုင်သည်။
၆။-BPP-Challenge လုပ်ခြင်းကို တစ်ခုမက များစွာ ပြိုင်တူ ခံရလျှင် အားလုံးအတွက် ပုို့စ်တစ်ပုဒ် ရေးပြီးတုန့်ပြန်ပါက အလုပ်ပြီးမြောက်သည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။
၇။-မိမိ BPP-Challenge လုပ်ထားသူများကို အသိပေးရာ၌ တဂ်(Tag) လုပ်ထားသည်ဟု မသုံးဘဲ ချဲလင့် (Challenge) လုပ်ထားသည်ဟု အသုံးပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ပုို့စ်တင်ပြီးကြောင်း အသိပေးရာ၌ ပိုမုိုမြန်ဆန်စွာ စာဖတ်သူထံ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ရောက်ရှိစေရန်https://www.facebook.com/groups/mbcdays/ သုို့ သွားရောက်ပြီး အသိပေးစေလုိုပါသည်။ ထုိုဖေ့စ်ဘုတ်ကိုလည်း မိမိတုို့ကိုယ်ပိုင် ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားစေလုိုပါသည်။
၉။ မိမိကတဖန် ပြန်ပြီး ချဲလင့်ပြန်လုပ်ရာတွင် ချဲလင့်လုပ်ခံထားရသူများ အချိန်မီ သိရှိစေနုိုင်ရန်အတွက် အထက်ပါ ဖေ့စ်ဘုတ်၌သော်လည်းကောင်း၊ ထုိုသူတုို့၏ ဘလော့စီဘောက်စ်၌သော်လည်းကောင်း၊ ထုိုသူတုို့၏ ဘလော့နောက်ဆုံးပုို့စ်၌ ကွန်မင့်ပေး၍သော်လည်းကောင်း အသိပေးကြစေလုိုပါသည်။
၁၀။=Ice-Bucket-Challenge နှင့်BPP-Challenge တုို့၏ ကွာခြားချက်မှာ Ice-Bucket-Challenge အလုပ်ခံရသူသည် ပြန်လည်တုန့်ပြန်နုိုင်လျှင် ၁၀ ဒေါ်လာ၊ မတုန့်ပြန်နုိုင်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးလှူရမည်ဖြစ်သော်လည်း BPP-Challenge အလုပ်ခံရသူမှာ ပြန်လည်တုန့်ပြန်နိုင်လျှင် အလှူငွေ ပေးလှူရန် မလုိုပေ။ မတုန့်ပြန်နုိုင်မှသာ ၅၀၀၀ ကျပ် ပေးလှူရန် ဖြစ်ပါသည်။
၁၁ ။ လုိုအပ်ပါက အများစု သဘောတူညီမှုဖြင့် စည်းကမ်း အလျော့အတင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Posted by mabaydar at 11:18 AM
Labels: Activities , General , Knowledge , သူငယ်ချင်းများ
ကောင်းလိုက်တာ သာဓုခေါ်ဆိုရင်း စိန်ခေါ်မှု့တွေကိုထောက်ခံအားပေးသွားပါတယ်
9/30/2014 1:13 PM
အစ်မ မဒမ်ကိုး ရေ... ဟုတ်တယ်... ခုတော့ အားနာနာနဲ့ပဲ ပြန် Challenge ကတယ်... ပြန်စည်ကားစေချင်တာကိုး....
9/30/2014 5:45 PM
ကလေးတွေလက်ရေးက သူကြီးလက်ရေးထက် ပိုလှတယ်။ ပုိုရှင်းတယ်။ ပုိုသပ်ရပ်တယ်။ ချစ်စရာအရေးလေးတွေ။
အခုလုို တင်ပေးလုိုက်တော့ အလှူရှင်တွေလဲ စိတ်ကြည်နူးရတာပေါ့။
တန်ပြန်ချဲလင့်လုပ်ထားတော့လဲ လုပ်လုိုက်ရသေးတာပေါ့လေ။ မကြာမီ လာမည် မျှော်ပေါ့။း)
10/01/2014 6:39 AM
Helping Hands of TP Myanmar ဖတ်သွားတယ် မဗေဒါရေ... သာဓု သာဓု သာဓု
စိန်ခေါ်ပွဲလေး ဆက်လက်ရှင်သန်နေတာမြင်ရလို့ အတိုင်းထက်အလွန်ဝမ်းသာတယ်။
ဖေ့ဘုတ်မှာပျော်မွေ့နေကြသလို ဘလော့ရွာလေးကို တစ်ခါတစ်လေ စောင်းငဲ့လို့ကြည့်စေချင်တာ ရင်ထဲကပါ... ♥♥♥
10/02/2014 9:22 AM
Yamin Mato said...
sis yay...2weeks kyaw twar tal... byalllll... today mha post tin pyit tal...
Bal mhar donate ya ma lal so tar lay pyaw pya par naw... donate chin loe...
btw, today new post lay ko blog mhar lar read par ohn naw... :D
10/22/2014 11:34 PM
Introduction to Helping Hands of TP Myanmar & BPP ...
Free & Easy Korea Trip Day3(Part 2): Everland ->...
ပိတ်ကားနောက်ကွယ်က ဘီလူးခေါင်းနဲ့ မင်းသားလေး Kim Hy...
Blog Day 2014: I love All my Readers